I-Modern Guest House uhambo olufushane oluya e-Havelock Village
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Michelle
I-Private Guest House ilungele izivakashi noma abahambi bebhizinisi abaya e-Hawkes Bay. Ifanele ukuhlala okufushane nokude.
E-"The Apartment on Exmoor" uzoba nendlu yakho yezivakashi yangasese etholakala uhambo olufushane lwemizuzu emi-5 ukuya enhliziyweni ye-Havelock North's Village.
Le Apartment yesimanje eyodwa yokulala iminyene, icishe ibe ngamamitha-skwele angama-35 ngosayizi, ikhanya, libalele, futhi ithule futhi inakho konke okudingayo ukuhlala isikhashana noma isikhathi eside. I-Apartment ifaneleka kakhulu abantu abangu-1-2, kodwa ingakwazi ukuhlalisa umuntu wesithathu ku-sofa yokuphumula. Isilinganiso sasebusuku ngesabantu ababili. Kumuntu wesithathu, kunenkokhiso eyengeziwe engu-$50.00 ubusuku ngabunye. Ilineni linikeziwe. Ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abathathu.
I-Apartment inendlela yayo yokungena yangasese futhi ihlukaniswe nekhaya lami ngamagceke amabili angasese futhi abiyelwe ngokuphelele (ngaphambili nangemuva). I-Apartment ifakwe ngendlela esesitayeleni ukuze ikunikeze indawo yokuhlala enethezekile futhi ine-wifi, i-freeview TV, isidlali seDVD namaDVD amahhala.
Ikhishi legalari lihlome ngokuphelele ngohhavini wase-Westinghouse, i-hobs top top, i-microwave, ngaphansi kwefriji yebhentshi, i-toaster nakho konke ongakudinga ukuze "udle". Ngaphandle kwalokho, uhambo olufushane oluya e-Havelock North's Village ukuze ujabulele izindawo zokudlela nezinsiza eziningi okunikezwayo.
Ikamelo lokulala lihlangene futhi linombhede olingana nendlovukazi onethezekile, amatafula aseceleni kombhede namalambu okufunda.
Indlu yokugezela entsha yesimanje ineshawa engu-900 x 900 egcwele idome yeshawa kanye nesitimela sethawula elishisayo.
Kukhona i-ayina nebhodi loku-ayina efulethini uma kudingeka.
Kulabo abafuna ukuhlala isikhathi eside, i-Apartment inewashing yayo, ehlukene ne-Apartment. Indawo yokuwasha ifakwe impushana yokuwasha, umshini wokuwasha, udayi kanye nehhashi lezingubo okomisa izingubo. Ngicela ungazise uma ungena uma udinga ilondolo futhi ngizokuhlelela ukufinyelela.
Futhi nginamabhayisikili amabili kagesi atholakalayo ukuze ngiwaqashe nsuku zonke. Uma ungathanda ukuqasha lawa mabhayisikili ngesikhathi uhlala, ngicela ungazise uma ubhukha. Lezi zingaphansi kokutholakala.
4.89(361 okushiwo abanye)
4.89 out of 5 stars from 361 reviews
4.89 · 361 okushiwo abanye
Indawo engumakhelwane iwumgwaqo wokuhlala othule futhi leli fulethi litholakala endaweni eyi-cul de sac ibanga elifushane ukusuka enkabeni yedolobha i-Havelock North. Kukhona iNew World Supermarket ecishe ibe ngamamitha angama-400 ukusuka efulethini (ngaphakathi kwebanga lokuhamba).
Nginebhokisi lokukhiya emnyango ongaphambili nokhiye we-Apartment ngaphakathi. Ngizokwazisa ngekhodi yebhokisi lokukhiya noma lapho ungafinyelela khona ukhiye wefulethi ngaphambi kokufika kwakho.
Ngingase ngingabi khona ukuze ngikubingelele lapho ufika, kodwa uma udinga usizo ngesikhathi uhlala, imininingwane yami yokuxhumana ibhalwe ebhodini lezaziso le-Apartment.
Uma unezinkinga nganoma yisiphi isikhungo ngesikhathi uhlala, ngicela ungazise.
Nginebhokisi lokukhiya emnyango ongaphambili nokhiye we-Apartment ngaphakathi. Ngizokwazisa ngekhodi yebhokisi lokukhiya noma lapho ungafinyelela khona ukhiye wefulethi ngaphambi k…